iPhone X: New Apple casriga ah dadaweynaha Button Home for Design All-Screen - Rule News
iPhone X: New Apple casriga ah dadaweynaha Button Home for Design All-Screen
model New la 3 taariikhda lagu sii daynayo November ballan kamaradaha wanaagsan, aqoonsi wajiga, emojis kartoon ah, nolosha batari dheer oo xukun wireless
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “iPhone X: smartphone cusub Apple dadaweynaha button guriga oo dhan-screen design” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo, theguardian.com on Tuesday 12-kii September 2017 18.57 UTC
Apple ayaa soo bandhigay iPhone X, ay smartphone cusub qoto dheer uqaabaynta in lagu dhibciyo button guriga dhaqanka for design dhan screen-ah, iyo sidoo kale iPhone cusub 8 iyo iPhone 8 Plus lagu daydo.
Madaxweynaha Apple ee ku xigeenka of marketing dunida oo dhan, Phil Schiller, qaaday in marxaladda of shirkadda cusub Steve Jobs Tiyaatarka sugnaa gudaha brand cusub Apple Park Xarunta "spaceship" si daaha looga iPhone cusub.
cusub ee $999 (£ 999 - waxaa jira dollar-ka-pound sinnaanta kala duwan cusub ee wax soo saarka Apple) iPhone X la macruufka cusub ee shirkadda iman doonaa 11 software soo bandhigtay badhamada cusub on-screen iyo dhaqdhaqaajinta jirka si uu u bedelo button guriga jirka caadiga ah, taas ayaa ahaa halbowlaha ah ee iPhone tan iyo markii la bilaabay line ee 2007, oo lagu daray emoji cusub kartoon yeedhay Animoji.
The iPhone X, waxaa loogu dhawaaqaa 10, iman doonaa laba midabo, cawl bannaan iyo lacag, oo diyaar u ah pre-hagaajiyaan 27 October, iyo maraakiibta by 3 November. A doorasho kaydinta 256GB sidoo kale diyaar u noqon doona £ 1,149 doonaa.
Madaxa fulinta Apple Tim Cook ayaa sheegay in: "Tani waa iPhone X. Waa boodboodi ugu weyn ee weerarka tan iyo iPhone asalka ah. "
Halkii ay ka riixaya badhanka ah, users kor mari ka hoose si aad u hesho si screen guriga iyo mari iyo hay si ay u tagaan multitasking. Si aad u toosin isticmaala qalabka kaliya taabo screen ama iPhone kor u, halka xarun ay gacanta ayaa haatan la heli by kabacdi hoos uga geeska midig ee telefoonka sare.
iPhone X waxay leedahay a screen cusub OLED. Sawir: Justin Sullivan / Getty Images
hore ee qalabka qoreysa cutout a sare ee OLED guryaha bandhigay cusub Super isha ee nidaamka cusub True camera Qoto nidaam aqoonsi wajiga ka ID Face iyo qaadashada selfies la Apple ee Mode sawirka. Apple ayaa sheegay in Face ID awood u aqoonsashada milkiilaha telefoonka ee ka scan a 3D ah ee wejiga si uu u furo qalabka, sugee lacagaha iyo talooyin ku badbaadi passwords galay screens login iyo sidoo kale dhex galaan apps dhinac saddexaad.
nidaamyada la mid ah ayaa la isticmaalay by Microsoft ay Windows Hello-awood line computer dusha, laakiin ma jirto cid weli dillaac technology on smartphone a. Apple ayaa sheegay in nidaamka ahaa awood u hawlgalka xitaa marka user la xiran muraayadaha, oo kaliya u furayaa telefoonka marka user waxaa si firfircoon ugu raadineysey waxa at.
iPhone X kuma jiraan Apple ee ID Touch scanner faraha, taas oo la soo bandhigay in 2013 hoos button guriga la 5S iPhone ku.
Laakiin Apple ayaa sheegay in ID Face ay ka amaan badan ID Touch by qodob ka mid ah 20, awood u garanaynin dhexeeya wajiga user ee dhabta ah iyo sawiro - iyo xataa waji replica heerka Hollywood-- isticmaalayo nidaamka camera Qoto ah True, oo mashaariic ah map dhibic IR on wajiga in ay khariidada. Waxay xitaa ka shaqeeya oo iyadoo gudcur ah.
dambe ee iPhone X waa muraayad. Sawir: Justin Sullivan / Getty Images
Inta kale ee qalabka waxaa laga sameeyey bir iyo dhalooyinka, naqshadda maaliyadii in design ah ee iPhone ka dib 4, iyo mirroring in horjeeda Samsung Galaxy ee S8 laakiin aan lahayn shaashad qalooca. Waxay ka dhigan duwan ah weeraryahan in lagu daydo iPhone oo dhan-biraha la soo dhaafay, oo weli la ogeyn haddii ay xanuunka heer la mid ah ee nuglaanta sida casriga ah rooti horjeeda galaas-iyo-birta. Apple ayaa sheegay in muraayadda ahayd ugu waara ee abid lagu rakibay in smartphone a la xoojin biraha. Jack headphone waxaa weli aad u tagtay.
iPhone X wuxuu yeelan doonaa processor dambeeyay Apple ee, Bionic A11 in yimaado la neural Engine dhafan aqoonsiga wajiga iyo haatan leeyahay lix diirkja, ilaa sanadkii la soo dhaafay ee A10 afar diirkja. Apple ayaa sheegay in A11 ku lahaa 30% muuqaallo kale si dhakhso ah oo uu ilaa 70% processor ka dhaqso badan A10 ah, halka kordhin nolosha batteriga by laba saacadood ka badan iPhone 7 - dhibic xanuun in inta badan ee isticmaala iPhone hadda a.
Apple ayaa sidoo kale soo bandhigay Qamaan xukun wireless inay line iPhone markii ugu horeysay, kaas oo isticmaala a saxan gudahood dambe ee telefoonka inay aqbalaan lacag yeelista ka suuf ama goosin ka mid ah alaabta la xukun wireless dhisay. Waa feature in uu ahaa mid caadi ah Samsung ayaa line Galaxy S ee casriga ah ee ee la soo dhaafay saddex sano oo laga heli karo dhowr xafiiltamaan kale, iyo ka saaraysaa baahida loo qabo in keyd la cable awood u haysta in aad smartphone a.
dambe ee iPhone X leeyahay nidaamka camera dual hadda la yaqaan Apple ee, kaas oo soo baxay ee ku saabsan 2016'S iPhone 7 More oo leh hal camera ballaaran-xagal iyo hal "Telefoto" camera awood u siinaya telefoonka laba-jeer zoom ah indhaha, laakiin vertical janjeedha halkii horizontal. Labada kaamirooyinka ay leeyihiin dareemayaal cusub 12-megapixel, xasilinta image indhaha iyo Apple ayaa sheegay in ay soo hagaagtay nidaamka sawir xisaabeed in ay soo saaraan si fiican u, images faahfaahsan oo dheeraad ah.
Qayb ka mid ah nidaamka wanaagsanaaday waa version cusub ee shirkadda ee Mode sawirka, kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala si kiimikaysan qasayo asalka si ay u abuuraan qoto dheer gacmeed duurka, la mid ah in ay abuureen kamaradaha dSLR, wuxuuna beddeli saamaynta nalalka ee guud ahaan wajiga ku xiran ee ku. Xafiiltamaan ee Samsung iyo kuwa kale ayaa sidoo kale geeyey sifooyinka la mid ah, iyadoo ayna duleella u soo jireenka ah agagaarka faahfaahsan wanaagsan sida timaha. Waa la arkay in nidaamka Apple ee hagaajin karaan dhibaatooyin kuwii.
Apple ayaa sidoo kale soo bandhigay characters cusub emoji kartoon ah waxa uu ugu yeerayaa "animoji", kaasoo u ogolaanaya dadka isticmaala si khariidada wejiga on jilayaasha yar, sida robot ah, dawaco, gisi, ama saxaradu waxay anthropomorphised la isticmaalayo nidaamka aqoonsiga wajiga iPhone X ee. animoji kaliya ee loo soo diri karaa dadka kale ee Apple dhex Messages shirkadda ee app.
Ben Wood, oo madax ka ah cilmi CCS Aragti yiri: "IPhone X waa ka talaabsan ee jihada hardware cusub ee iPhone ayaa. bandhigay OLED An iyo design cusub u badan tahay inuu [noqon] Heerka on daydo iPhone mustaqbalka, laakiin Apple waa in marka hore wax looga qabto caqabad ku ah helitaanka sahayda ku filan.
"Hordhaca A biloway of technology OLED iyo design cusub awood Apple si tartiib gabagabeyso qiyaasta in sahaydu iyo kordhiyo faa'iidada. Qiimaha sare ee iPhone X waa farsamo loo baahan yahay oo muhiim ah in la xakameeyo dalabka ee mustaqbalka dhaw. "
iPhone The 8, kaas oo bilaaban doona $ 699 / £ 699. Sawir: Stephen Lam / Reuters
Garab iPhone X, Apple ayaa sidoo kale soo bandhigay laba kale oo casriga cusub, iPhone 8 iyo 8 More, kuwaas oo muhiimad updated versions of 2016'S iPhone 7 iyo 7 More, oo waxay isku ahaayeen updates of iPhone 6 iyo iPhone 6S khadadka ka 2014 iyo 2015 siday u kala horreeyaan.
On baxsan iPhone 8 iyo 8 Plus ayaa galaas on hore iyo dib, iyagoo ku xidhan xadhig midab-kulan-a aluminium agagaarka ka baxsan. Apple ayaa sheegay in hal galaas oo ku saabsan dib u ahaa "galaaska ugu raagaya on smartphone kasta", isku dayaya in ay qalbi qabowjin cabsi ah in iPhone cusub uu noqon doono ka yar adkaysi badan iPhone 7.
iPhone The 8 iyo 8 Plus labaduba waxay leeyihiin cusub A11 chip Bionic Apple ee, laakiin aan neural Engine ee in lagu rakibay si iPhone X, oo la hagaajiyay screens la feature Tone True ee shirkadda oo ku hadla hagaagtay iman iyadoo qaabka hadda la button guri la ID Touch 2 scanner faraha. Laakiin way ka maqan tahay aqoonsi wajiga iyo design oo dhan screen-of iPhone X u ah.
Schiller yiri: "Tani waa iPhone ugu horeysay abuuray AR. Kamaradaha ayaa waxaa si gaar ah dhexdiisa ee warshada taas oo ka dhigaysa farqi weyn u AR, oo lagu daray faa'iidooyinka AR ka A11 chip Bionic cusub. "
Apple ayaa sidoo kale ku daray wireless Qamaan amraya sida X iPhone iyo Bluetooth ugu dambeeyey 5.0 standard, taas oo la filayo in ay noqdaan si weyn loo isticmaalaa in sanadka soo socda, waayo, headphones iyo xorroyad kale.
iPhone The 8 iyo 8 Plus iman doonaa saddex midabada iyo bilaabaan $ 699 / £ 699 iyo $ 799 / £ 799 siday u kala horreeyaan la 64GB of kaydinta, diyaar u ah pre-si ka 15 September iyo maraakiibta by 22 September. A doorasho kaydinta 256GB doono sidoo kale la heli karaa.
Wood ayaa sheegay in: "The iPhone X iyo iPhone 8 daydo waa wax aad u xoog badan in faylalka Apple ee ah in wax looga qabto tartanka sii kordhaya ka Samsung iyo kuwa kale. Xafiiltamaan daawan doonaa sida ugu dhakhsaha badan Apple kulmi karaan baahida loo qabo iPhone X oo ay bilaabaan in la dhiso xadad on design cusub qaybaha cusub. "
← Roomba Kan sameeyey May Share Maps ee Users’ Homes la Google, Amazon ama Apple Google Home Mini Review: Voice Kaaliyaha Guddoomiyaha →